ကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာ Yanolja သည်ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက်အမှတ် ၁ ခရီးသွားလာရေးသတင်းအချက်အလက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်“ ဟေး၊ ကစားကြ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရိုးရှင်း။ လက်တွေ့ကျသောအထင်အမြင်ကိုဖော်ပြရန် logotype ကို san-serif ဖောင့်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စာလုံးအသေးများ သုံး၍ ၎င်းသည်စာလုံးအကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာလုံးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျော့ပျောင်း။ စည်းချက်ကျသည့်ပုံရိပ်ကိုပေးနိုင်သည်။ အက္ခရာတစ်ခုချင်းစီအကြားအကွာအဝေးကို optical illusion ကိုရှောင်ရှားရန်အထူးပြင်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်သေးငယ်သောအရွယ်အစားပင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်တောက်ပသောနီယွန်အရောင်များကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောပုံများရရှိရန်ဖြည့်စွက်ပေါင်းစပ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စိုက်ပျိုးရေးစာအုပ် ဤစာအုပ်သည်စိုက်ပျိုးရေး၊ လူနေမှုဘဝ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဘေးဖယ်ထားမှု၊ အမျိုးအစားဒီဇိုင်း၏လမ်းဖြင့်, စာအုပ်လူများ၏ဗေဒဝယ်လိုအားပိုမိုဖြည့်တင်းသည်။ ဖိုင်နီးကပ်ရန်အတွက်စာအုပ်အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ စာဖတ်သူများသည်စာအုပ်ကိုဖြိုပြီးမှသာစာအုပ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဤပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်စာဖတ်သူများအားဖိုင်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားစေသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောရှေးဟောင်းလှပသောလယ်ယာမြေသင်္ကေတများဖြစ်သောဆူဇူ Code နှင့်အချို့သောအသက်အရွယ်များတွင်အသုံးပြုသောစာရိုက်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။ သူတို့က recombination နှင့်စာအုပ်အဖုံးတွင်စာရင်းဝင်ခဲ့ကြသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဤသည်မှာ Co-Creation! Camp ၏အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ လူထုကအနာဂတ်အတွက်ဒေသခံပြန်လည်ရှင်သန်မှုအကြောင်းပြောဆိုသည်။ ဂျပန်သည်မကြုံစဖူးသောလူမှုရေးပြissuesနာများဖြစ်သည့်မွေးဖွားနှုန်းနိမ့်ခြင်း၊ လူ ဦး ရေအိုမင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းလူနေထူထပ်ခြင်းစသည့်ပြisနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ "Co-Creation! Camp" သည်သူတို့၏သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသူများအတွက်ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးမှတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကူညီပေးရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကိုလူတိုင်း၏ဆန္ဒအရသင်္ကေတပြုသည်။ ၎င်းသည်အတွေးအခေါ်များစွာကို ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်း ၁၀၀ ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
သကြားလုံးထုပ်ပိုး Principles5သည်ရယ်စရာကောင်းပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောသကြားလုံးထုပ်ပိုးမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်သစ်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နှိုက်မှအဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အင်တာနက်မှတ်စုများမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အထုပ်ဒီဇိုင်းတိုင်းတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတ်မိလွယ်သောဇာတ်ကောင်များပါဝင်သည်။ လူများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည် (Muscle Man, Cat, the Lovers စသည်ဖြင့်)၊ သူနှင့်ပတ်သက်သောလှုံဆော်အားပေးသောသို့မဟုတ်ရယ်စရာကောင်းသော ၅ ချက် (ဤတွင်နိယာမ - ၅ အခြေခံ) ။ ကိုးကားချက်အတော်များများမှာလည်းသူတို့မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်အချို့ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရိုးရှင်းသော်လည်းအမြင်အာရုံထူးခြားသည့်ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးရီးအဖြစ်ချဲ့ထွင်ရန်လွယ်ကူသည်
လိုဂို N&E အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် N, E သည်တည်ထောင်သူ Nelson နှင့် Edison တို့၏အမည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သူမသည်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန် N & E ၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်အသံလှိုင်းပုံစံကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ Handcrafted HiFi သည်ဟောင်ကောင်ရှိပြိုင်ဘက်ကင်းသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ သူမသည် High-end ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတင်ပြရန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ထား။ လူတွေကဒီတံဆိပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုလူတွေနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လိုဂိုကိုဖန်တီးရန်စိန်ခေါ်မှုသည်ရှုပ်ထွေးသောဂရပ်ဖစ်များကိုမသုံးပဲ N နှင့် E ၏အက္ခရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာမည်သို့မှတ်မိနိုင်မည်ဟုသူကဆိုခဲ့သည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ် Upstox သည်ယခင်က RKSV ၏လက်အောက်ခံသည်အွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးသမားများနှင့်လူရမ်းကားများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသောထူးခြားသောထုတ်ကုန်များသည်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုလေ့လာရေးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Upstox ၏ USP ၏အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ Lollypop ၏စတူဒီယိုတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်ကာလအတွင်းမဟာဗျူဟာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ နက်ရှိုင်းသောပြိုင်ဘက်များ၊ သုံးစွဲသူများနှင့်စျေးကွက်သုတေသနတို့က ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်သီးခြားဝိသေသလက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဖြေရှင်းချက်များပေးရာတွင်ကူညီသည်။ ဒီဇိုင်းများသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့်အလိုအလျောက်ဖန်တီးထားသောသရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ကာတွန်းရုပ်ပုံများနှင့်အချက်အလက်အခြေပြုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ monotony ကိုချိုးဖောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာ စိုက်ပျိုးရေးစာအုပ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သကြားလုံးထုပ်ပိုး လိုဂို ၀ ဘ်ဆိုဒ်